အကောင်းဆုံး Ergothioneine အမှုန့် （497-30-3） - ထုတ်လုပ်သူစက်ရုံ
Facebook က Instagram ကို တွစ်တာ
UROLITHIN တစ် ဦး
အောက်တိုဘာလ 12, 2020
Cofttek သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံး Ergothioneine အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင် ၁၀၀ ကီလိုဂရမ်လစဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ရှိသည်။
ယူနစ်: 1kg / အိတ်, 25kg / စည်
Ergothioneine အမှုန့် (၄၉၇-၃၀-၃) Specifications
အမည်: Ergothioneine (EGT)
မော်လီကျူးအလေးချိန်: 229.30 g / moll
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 275 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ 277
နာမ်: L-Ergothioneine; (+) - Ergothioneine; သီယိမ်း၊ စာနာခြင်း၊ Ergothionine; Erythrothioneine; Thiolhistidinebetaine
InChI Key ကို: SSISHJJTAXXQAX-ZETCQYMHSA-N
ဘဝတစ်ဝက်: N / A
ပျော်ဝင်: DMSO, Methanol, ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်
သိုလှောင်မှုအခြေအနေ:0to4C တိုတောင်းသောသက်တမ်းအတွက် (ရက်များမှသီတင်းပတ်များ) သို့မဟုတ် -20 C ရေရှည် (လများ)
လျှောက်လွှာ: Ergothioneine သည်တစ်ခါတစ်ရံအရေပြားတွင်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သည်။ အရေးအကြောင်းများကိုကာကွယ်ရန်၊ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းလက္ခဏာများကိုလျှော့ချရန်နှင့်နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။
Ergothioneine (၄၉၇-၃-၃) NMR Spectrum
ထုတ်ကုန်များနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များအတွက် COA, MSDS, HNMR လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာ.
Ergothioneine အမှုန့် (497-30-3) ဆိုတာဘာလဲ။
Ergothioneine (EGT) သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပွားသောအမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် imidazole လက်စွပ်ပေါ်ရှိဆာလဖာအက်တမ်ပါဝင်သော histidine ၏ thiourea derivative ဖြစ်သည်။ ၎င်းဒြပ်ပေါင်းကိုသက်ရှိအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သောအထူးသဖြင့် Actinobacteria, Cyanobacteria နှင့်မှိုများ၌ပြုလုပ်သည်။
Ergothioneine (EGT) သည်အချို့သောဘက်တီးရီးယားနှင့်မှိုများတွင်သဘာဝ chiral အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဓါတ်တိုးစေသည့်ဓါတ်တိုးစေသည့်ဓါတ်ထိန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရေးကြီးသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အစွန်းရောက် scavenger၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်စစ်ထုတ်စက်၊ ဓါတ်တိုးခြင်းလျှော့ချရေးတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဆယ်လူလာဇီဝသက်ရှိများအားထိန်းညှိခြင်းနှင့်ဇီဝကမ္မ cytoprotector စသည်တို့ဖြစ်သည်။
Ergothioneine အမှုန့် (၄၉၇-၃-၃) အကျိုးကျေးဇူးများ
Ergothioneine (EGT) ကိုဆေးဝါးအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ လူများသည်အသည်းပျက်စီးခြင်း၊ မျက်စိအတွင်းတိမ်၊ အယ်ဇိုင်းမားရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါနှင့်နှလုံးရောဂါအတွက် ergothioneine ကိုသောက်သုံးသည်။ Ergothioneine သည်တစ်ခါတစ်ရံအရေပြားတွင်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သည်၊ အရေးအကြောင်းများကိုကာကွယ်ရန်၊ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းလက္ခဏာများကိုလျှော့ချရန်နှင့်နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။
အာgothioneine (ဥပမာ) သဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်နေသော thiol အမိုင်နိုအက်ဆစ်သည်ဓါတ်တိုးစေသည့်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ဓာတ်စာဖြည့်စွက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Ergothioneine အမှုန့် (၄၉၇-၃၀-၃) အသုံးပြုမှု?
Ergothioneine (EGT) သည်အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်သည်။ မှိုများတွင်အဓိကတွေ့ရသောအပြင်ကဏန်းဘုရင်နှင့် ergothioneine ပါသောမြက်များပေါ်တွင်စားကျက်ရှိသောတိရိစ္ဆာန်များမှအသား၊ အခြားအစားအစာများ။ အမိုင်နိုအက်ဆစ်များသည်ပရိုတိန်းများအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သောဓာတုပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ Ergothioneine ကိုဆေးအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
လူများသည်အဆစ်နာခြင်း၊ အသည်းပျက်စီးခြင်း၊ မျက်စိအတွင်းတိမ်၊ အယ်ဇိုင်းမားရောဂါ၊ ဆီးချို၊ နှလုံးရောဂါ၊ အရေးအကြောင်းများနှင့်အခြားအခြေအနေများအတွက် Ergothioneine (EGT) ကိုအသုံးပြုကြသည်။
အာgothioneine (497-30-3) လြှောကျလှာ
Ergothioneine (EGT) သည်မှိုများတွင်သာမကအနီနှင့်ပဲအနက်ရောင်များတွင်အဓိကတွေ့ရသောအမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်သည်။ ergothioneine ပါဝင်သောမြက်များကိုစားသောတိရိစ္ဆာန်များတွင်လည်းတွေ့ရသည်။ Ergothioneine ကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
Ergothioneine (EGT) သည်အချို့သောဘက်တီးရီးယားနှင့်မှိုများတွင်သဘာဝ chiral အမိုင်နို - အက်ဆစ်ဓါတ်တိုးဓါတ်တိုးစေသည့်ဓါတ်တိုးစေသည့်ဓါတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရေးကြီးသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အစွန်းရောက် scavenger၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်စစ်ထုတ်စက်၊ ဓါတ်တိုးခြင်းလျှော့ချရေးတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဆယ်လူလာဇီဝသက်ရှိများအားထိန်းညှိခြင်းနှင့်ဇီဝကမ္မ cytoprotector စသည်တို့ဖြစ်သည်။
Ergothioneine အမှုန့် ရောင်းမည်(ဘယ်မှာရန် Ergothioneine ကိုဝယ်ပါ အမှုန့်အမြောက်အများ)
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်ဖောက်သည်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအဓိကထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးရှိသည် ထုတ်ကုန်များ။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းကိုသင်စိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီစေရန်အမိန့်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းဖြင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပြီးအမှာစာများကိုလျင်မြန်စွာ ဦး ဆောင်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းကိုအချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီအရသာကောင်းမွန်စေမည်။ တန်ဖိုးမြှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အလေးထားသည်။ သင်၏စီးပွားရေးကိုအထောက်အကူပြုရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာမေးခွန်းများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာပရော်ဖက်ရှင်နယ် Ergothioneine အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းများကိုအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သည်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ် ၀ န်းစားသုံးမှုအတွက်အန္တရာယ်ကင်းကြောင်းသေချာစေရန်တင်းကြပ်ပြီးလွတ်လပ်သောစမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်သည်။
Tanret MC ။ l 'ergothioneine ၏နံပါတ်သည်အငြိမ်းစားယူထားသည်။ Compt Rende ။ 1909; 49: 22-224 ။
Genghof DS, ergothioneine နှင့် hercynine ဗန် Damme O. ဇီဝပေါင်းစပ်ခြင်းတို့သည် mycobacteria မှဖြစ်သည်။ J ကို Bacteriol ။ 1964; 87: 852-862 ။
Genghof DS ။ မှိုများနှင့်အက်တီနိုမီစီနက်တီတို့မှ ergothioneine နှင့် hercynine တို့၏ဇီဝပေါင်းစပ်မှု။ J ကို Bacteriol ။ 1970; 103: 475-478 ။
Melville DB, Eich S က, Ludwig ML ။ Ergothioneine ၏ biosynthesis ။ J ကို Biol Chem ။ 1957; 224: 871-877 ။
Askari A, Melville DB ။ Ergothioneine biosynthesis ၏တုံ့ပြန်မှုအစီအစဉ်: hercynine သည်အလယ်အလတ်ဖြစ်သည်။ J ကို Biol Chem ။ 1962; 237: 1615-1618 ။
PQQ အမှုန့် (72909-34-3)
Cofttek ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးထုတ်လုပ်မှု၊ သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ရောင်းအားများကိုပေါင်းစပ်ရန်အတွက်အဆင့်မြင့်နည်းပညာရှိသောအစားအသောက်ဖြည့်စွက်လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
Nicotinamide Mononucleotide ၏အကောင်းဆုံးအိုမင်းခြင်းအားဖြည့်စွက်ခြင်း (NMN)
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ဖြည့်စွက်ချက်များ - အကျိုးကျေးဇူးများ၊ သောက်သုံးသောနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
Palmitoylethanolamide (PEA) - အကျိုးကျေးဇူးများ၊ သောက်သုံးသော၊ သုံးစွဲမှုများ၊
2021 ခုနှစ်တွင် Alpha GPC ၏အကောင်းဆုံး Nootropic ဖြည့်စွက်
Yucheng ဘူတာ, Yucheng မြို့, Licheng ခရိုင်, Luohe စီးတီး, နန်ပြည်နယ်ရှိတရုတ်နိုင်ငံ၏အနောက်
ခွငဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ရောင်းချသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ပြောဆိုချက်ကိုမျှကျွန်ုပ်တို့မလုပ်ပါ။ ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်မျှ FDA သို့မဟုတ် MHRA မှအကဲဖြတ်ခြင်းမရှိပါ။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးပြီးအရည်အချင်းပြည့်ဝသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တစ် ဦး ၏အကြံဥာဏ်ကိုအစားထိုးရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များမှပေးသောထောက်ခံစာများသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများသည် cofttek.com ၏အမြင်များမဟုတ်ပါ။ ထောက်ခံချက်သို့မဟုတ်အချက်အလက်များအဖြစ်မယူသင့်ပါ။ မူပိုင်ခွင့်© COFTTEK Inc.